Nhau - Ndeupi musiyano mukutaridza kwe LED, LCD, Projector Uye DLP?
LED iri "Chiedza Chinoburitsa Diode", chidiki chidiki chiri 8.5 inch, inogona pixel yekugadzirisa uye unit module shanduko, Hupenyu hwehupenyu nguva inopfuura 100,000 maawa.
DLP iri "Dhijitari Mwenje Kufamba" saizi ingangoita 50inch ~ 100inch, hupenyu nguva ingangoita maawa zviuru zvisere. inoda wholesale kutsiva kana projekti inoratidzira nepaneru zvine dambudziko.
1. Kugadziriswa kwemamiriro ekunze ekupenya
DLP \_ LCD inoratidzira kupenya hakuna kukwirira. Kupenya kwakapenya kunogumira, kusakodzera kukwirira brighness hofisi kana kudzora kamuri nharaunda.
LED yekuratidzira kupenya inogona kugadzirisa pakati pe600-1500cd, sutu yenzvimbo dzakasiyana siyana.
2. Chiitiko chekuratidzira
LCD inoratidzira, kumberi kwakagadzirwa neinopenya kana yakajeka giraidhi pani.
DLP mune inoshanda application, ichave neanoratidza maitiro.
Akatungamira nekuti inongoitika yechiedza unit, uye rakasviba matte nhema pani, nhema yakasungirirwa mwenje pamusoro, saka kuratidzwa kwemavara kwechero kona kunogona kuchengetedzwa kwakasimba.
3. maonero emakona enzanisa
4. Ratidza kushanda kuenzanisa
5. musiyano reshiyo enzanisa
Akatungamira kushandisa dema akatungamira mwenje, iyo skrini yepamusoro ndeyemhando yemhando chimiro. ingangoita isina tambo yakatwasuka inoratidzira mwenje, Saka LED skrini yekusiyanisa muyero yakakwira se4000: 1, inoita iyo LED yekuratidzira skrini ive yakapinza uye yakajeka.
Mazhinji DLP projekita musiyano muyero inogona kuve 600: 1 kusvika 800: 1, yakaderera mutengo zvakare inogona kuve 450: 1 .LCD purojekita kusiyanisa reshiyo iri nezve 400: 1, uye yakaderera mutengo chete 250: 1.
DLP vhidhiyo madziro
DLP pane zvinodiwa nharaunda zvakakwirira kwazvo, senge tembiricha, hunyoro, guruva, mwenje, nezvimwewo, kunyanya iyo skrini ndiyo inonyanya kutambura, kukwenya tambo yakatetepa haigone kudzimwa uye kugadziridzwa, pane chakaomesesa haisi nguva ye nguva ichadzokororazve chikoro, zvikasadaro mufananidzo unozogadzirisa otomatiki. Musiyano weDLP chaiwo wakaderera kwazvo, unoratidzwa munzvimbo ine rima inoratidzira zvikanganiso, ndiko kuti, mifananidzo mizhinji yezvinhu zvakasviba haina kujeka, ichi chiitiko chiri pachena. Zvakadai seyebhuku rinoona nzvimbo ine rima, muDLP skrini pane yakasviba, haigone kusiyanisa, saka painoshandiswa mukutarisa mifananidzo, mhando yemufananidzo ichadzikiswa zvakanyanya. DLP purojekita kushaya simba imwe chete, ndiko kuti, "muraraungu mhedzisiro", chairo mashandiro acho anongopatsanurwa kubva kune iro iro dzvuku, girini uye bhuruu matatu monochrome, inoita kunge muraraungu mvura.
LCD vhidhiyo madziro
Iko kusarongeka kuri pachena kweLCD purojekita ndeyekuti dema dema rakashata uye musiyano hauna kunyanya kukwirira.Ruvara mutema weLCD purojekita inogara ichioneka grey, uye chikamu chine mumvuri chakasviba uye chisina ruzivo.Izvi hazvina kukodzera kutamba vhidhiyo, izvo zvisina kunyatsonaka kubhaisikopo, asi haisi mutsauko mukuru neDLP projekita kana uchitamba mazwi.Chipiri chinokanganisa ndechekuti mhedzisiro yeLCD purojekita inoratidza chimiro chepikisheni, uye muoni anoita kunge ari kuona mufananidzo kuburikidza netambo . Iyo SVGA (800 x 600) fomati yeiyo LCD projekita, zvisinei nehukuru hwesikirini yemufananidzo, inogona kuoneka zvakajeka mu pixel grid kunze kwekunge chigadzirwa chepamusoro-resolution chashandiswa. LCD ikozvino yakatanga kushandisa iyo micro lens array (MLA), inogona kuvandudza kufambisa kweXGA fomati yeLCD mapaneru, kutapudzwa kwemazino kwepikisheni, iyo penjere uye isiri pachena pixel gridhi, uye kupinza kwemifananidzo hakuzounze chero pesvedzero. Iyo inogona kudzora pikisheni chimiro cheLCD kusvika zvakada kufanana neveDLP projekita, asi zvakadaro zvishoma gap.
HD LED mukana
1.Mamwe anopfuura maawa zviuru zana zvehupenyu nguva
2.Superior kupisa kupisa kupera
4.Zvishoma zvekuchengetedza mutengo
1.More anopfuura10 0000 maawa hupenyu hupenyu
Iyo inopenya pamusoro inosanganisirwa, aruminiyamu ndiro dhizaini, Muviri wese kupisa kupisa kuitisa kupisa dissipation, inogona kuve yakanyanya kunaka kupisa kupisa
Flank mbiri kupisa kupisa: Iko kupisa kuri mubhokisi kwakapararira kubva kumativi, ndokubatanidza mapaneru, Muchikamu chekumashure mativi ese ekuumbwa kwenzira dzepamusoro uye dzepasi, kushandiswa kwemhepo kumanikidza kuumba mweya wepamusoro uye wezasi kutenderera musimboti, kupisa kwakazara kupisa.
Iyo yekuratidzira musimboti weRGB yekuzvimiririra mwenje inochengetedza iko kwechokwadi kwemavara, ichidzivirira kurasikirwa kwemavara uye kutsauka kunokonzerwa nezvinhu uye nemwenje unomhanya munzira muhunyanzvi hwekudzosera kumashure uye kuratidzira.
YWTLED Zvese Mune Imwe LED - TV inongoerekana yaita magetsi mwenje, iine rima matte dema yepasi pani, nhema nhema bead pamusoro, kuitira kuti ruvara rwekuita kwechero inoonekwa kona inogona kuchengetedzwa isina kusimba.
Yakaderera yekugadzirisa mutengo
LED standard unit, inoratidza pani inoumbwa nezvidimbu zvidiki; kuratidza mapikisheni anoumbwa nemwenje we LED wega.
Kana paine poindi yecrotic, chitsiva neipare unit uye gadzirisa mwenje we LED ；
Kana iwo mapaneru achiratidzika kunge asingawanikwe, diki diki rekuratidzira rinogona kutsiviwa ；
Semuenzaniso, 32-inch inoratidzira nzvimbo inongova 4% yeyakajairwa mapaneru.
Iyo yazvino mainstream ndeye 46-inch, 55-inch, uye 60-inch splice unit, ine yakaderera yakaenzana mutengo.
LED hapana mutsauko mushure meyuniti kugadzirisa
Kana uchitsiva imwe LED, unogona kusarudza mwenje we LED wakachengetedzwa mukugadzirwa. uye kupenya kwakatwasuka poindi kururamisa kunogona kuitiswa kuti irambe ichienderana ；
Kana uchitsiva yuniti module, iyo module yese uye mapaneru zvinoshandiswa kugadzirisa kusagadzikana, kuitira kuti tembiricha tembiricha uye kupenya zvienderane neazvino mamiriro echirongwa purojekiti.
LCD vhidhiyo madziro Musiyano mukuru mushure meyuniti kugadzirisa
Yekutsiva yuniti yemavara uye kupenya zvese zvitsva mamiriro, hapana kuderedzwa, yunifomu chaizvo uye inopenya ；
Uye mamwe mauniti epakutanga, mushure mekushandisa kwenguva yakareba, kupenya kwekudzivirira uye skrini uye zvimwe zvinhu, senge volatilization yeiyo poda yechiedza, ruvara, uye kupenya kwaderera zvakanyanya
Pane misiyano yakakosha mukuonekwa kwese.